भाइरल बन्दै प्रियंका र आयुष्मानको आकाशे पोज, कति टेकमा लिईयो तस्वीर ? हेर्नुस् प्रीयंकाको जवाफ - www.dthreeonline.com
भाइरल बन्दै प्रियंका र आयुष्मानको आकाशे पोज, कति टेकमा लिईयो तस्वीर ? हेर्नुस् प्रीयंकाको जवाफ
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ०७, २०७५ समय: १७:०६:२४
इटहरी/ पछिल्लो समय धेरैले रुचाइएको चर्चित जोडी हो अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी । बेला बेलामा निकै चर्चामा आउने गरेको यो जोडी पुन चर्चामा देखिएको छ । केहि समय अगाडी इन्गेंजमेन्ट गरेको यो जोडी अर्को बर्ष बिबाह गर्ने तयारीमा छन् । यतिबेला स्विमिङका समयमा खिचेको तस्बिर सार्वजनिक भएसँगै यो जोडीको चर्चा बढेको हो ।
तस्बिरमा दुवैजना एक अर्कासँग रमाइरहेका छन् । स्विमिङ पुलमा आयुष्मानले प्रियंकालाई उचालेका तस्बिर अहिले चर्चामा छ । ईन्स्टाग्राममा प्रीयंकाले सार्बजनिक गरेको यो तस्वीरमा विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरु आएका छन । एक रमाईलो प्रश्न यो तस्बिरमा गरिएको छ जस्मा प्रीयंकाले पनि जवाफ फर्काएकी छन । ‘कति टेकमा लिएको हो यो तस्वीर ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले हास्दै त्यस्तै ७-८ टेकमा भनेर जवाफ फर्काएकी हुन् ।
उक्त्त तस्बिर बाहिरीए संगै धेरैले आफ्नै तरिकाको विश्लेषण गरेका छन् । कसैले मिडियामा छाउन या चलचित्रको प्रसार साथै आफ्नो प्रचारको लागि समेत भन्न भ्याएका छन् ।दिदीभाइको नाताले चर्चामा आएका उनीहरु केही समय पछि प्रेमी प्रेमिकाका रुपमा प्रस्तुत भए । जसले गर्दा सबैको ध्यान यो सुन्दर जोडीप्रति खिचिएको थियो ।
विवादपछि गायक पशुपति शर्मा पहिलो पटक न्यूज-२४ टेलिभिजनमा आएर यसो भने
ईटहरी/ ‘लुट्न सके लुट…’ गीतका कारण विवादमा छन् गायक पशुपति शर्मा । सिर्जनाकै कारण अक्सर चर्चा र बेला-बेलामा विवादमा आउने...
फिल्म ‘प्रेमलीला’ प्रदर्शन नजिकिदै गर्दा निर्देशकमाथी नायिका दिपशिखाले लगाईन यस्तो गम्भीर आरोप
ईटहरी/ फागुन १० गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ’प्रेमलीला’की नायिका दिपशिखा खड्काले फिल्मका निर्देशक जनक पाण्डेलाई ग...
ईटहरी/ हामिलाई लाग्छ कसैको सहयोगको लागि एक शेयर निकै महत्त्वपूर्ण हो । सत्य यहि हो पनि, एक शेयरले कसैलाई ठूलो सहयोग पुग्...
युवा स्टार अनमोल केसी र नायिका सारा सिर्पाली साथी मात्रै होलान त ?
इटहरी/ युवा स्टार अनमोल केसी र अभिनेत्री सारा सिर्पाली बिचको सम्बन्धको बिषयले यतिबेला निकै चर्चा परिचर्चा पाइरहेको छ । अ...
‘समर लभ’ टिजर लभ र रोमान्सले भरिपुर्ण : रेवती न्युड, आशिष र नम्रता एकै ओछ्यानमा, हेर्नुस् (टिजर सहित)
ईटहरी/ नेपालमा कृतिमा आधारित फिल्महरु केहि रुपमा बनेका छन् । यस्तैमा सुबिन भट्टराईको बहु चर्चित उपन्यास समर लभमा आधारित ...
यसपाली विहे गर्दै रेखा, को हुन दुलाहा ? भिडियोमा हेर्नुस्
काठमाडौ/ शुक्रबार बाट रिलिज भएको फिल्म ‘मालिका’ले सुरुवाती बाटै दर्शक तान्न सफल भएको छ । आज शनिवार धेरै जसो ...